July 2014 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
8:49:00 AM movies 1 comment
Perfume: The Story ofaMurderer (2006 )
တောင်းဆိုကြလွန်းတဲ့ လူကနေ ရေမွှေးထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
Crime | Drama | Fantasy အမျိုးအစား ဇာတ်လမ်းပါ..
ကျနော်တို့ အတွက်တော့ 18+ လို့ပြောရမလားမသိ...
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားပါ..
မြန်မာစာတန်းထိုးကတော့ မကြာမှီ လာမည်မျှော်ပေါ့...
ဖုန်းသမားတွေကတော့ အောက်က Download ကနေ
ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..Firedrive မှာ တင်တဲ့ Movies တွေကို download နည်းနှင့်
တိုက်ရိုက်ကြည့် တဲ့ နည်းလမ်းကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ.
ဖုန်းသမားတွေအတွက် အခုဆိုရင် အလွယ်ကြည့်နိုင်နေပါပြီ..
အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ပြထားပါတယ်..
ပုံမှပြထားအတိုင်း MX Player နဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
PC သမားတွေ ကတော့ အောက်မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
လွယ်လွယ်ကူကူ ဒေါင်းယူချင်ရင်တော့ IDM လေးသာ စက်ထဲ ထည့်ထားပေါ့နော်
ကြည့်ဖို့ အတွက် ပုံမှာ ပြထားတယ်နော်..
အဆင်မပြေတာ ရှိရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..
အလည် ရောက်ခဲ့ရင် ကျနော့် ရဲ့ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း Pages လေးကို
Like ကလေးတချက်နှိပ်ပြီး အားပေးခဲ့ပါအုန်း.
ကျနော့်ကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေမှာ
Krrish3(မြန်မာစာတန်းထိုး)
9:09:00 PM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
YouTube ကနေ တင်ထားတာ ကြည့်မရဘူးဆိုလို့
Fierdrive ကနေ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျနော် နှစ်သက်တဲ့ အန္ဒိယ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ...
ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..Firedrive မှာ တင်တဲ့
Movies တွေကို download နည်းနှင့်
Srt By - https://www.facebook.com/groups/myanmarsub/
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၂ ) ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
5:10:00 AM movies, Prison Break No comments
prison break season2final episode ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ..
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပုံမှန်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဒီနေရာကနေ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်..
မနက်ဖြန် ခရီးသွားစရာရှိလို့ season3ကို နောက် သုံးရက်လောက်ကြာ
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၂ ) ကို ( မြန်မာ စာတန်းထိုး ) နဲ့
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အပိုင်း ( ၁ ) ကနေကြည့်ချင်ရင် ဒီလင့်မှာ ကြည့်ပါ..
8:37:00 PM Android, Downloader No comments
Android တွေအတွက် အကောင်းဆုံး YouTube Downloader လို့
ဆိုနိုင်တဲ့ Apk လေးပါ..
YouTube က ရုပ်ရှင်တွေ သီချင်းတွေကို
Online ကနေ ကြည့်မလား
သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ရှယ်ချင်လား..
FB မှာ ရှယ်ချင်လား..
ပိုပြီးကောင်းတာက မြန်မာစာနဲ့ ရိုက်ပြီးလည်း သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေကို
အသုံးပြုနည်းကတော့ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ APK လေးကို
ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးရင် သူ့ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..အောက်က ပုံအတိုင်းကျလာပါမယ်..
Search menu ပေါ်လာအောင် ဖုန်းရဲ့ 'menu' button ကိုနှိပ်ပါ..
အောက်က ပုံမှာ ပြထားပါတယ်..
ပေါ်လာတဲ့ menu ထဲကနေ ကိုယ်ကြိုက်ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပါ..
ကျနော်အောက်က ပုံမှာ ကျနော်တင်ထားတာတွေကို ရှာထားပါတယ်..
ကိုယ်နှစ်သက်တာတွေ့ရင် video ပုံပေါ်ကို
အောက်က ပုံအတိုင်း ..ကျလာပါမယ်..
အဲဒီမှာ Online ကနေ ကြည့်မလား
MP3 ဒေါင်းမလား နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်..
ကျနော်ကတော့ ဒီ APK လေးကို အတော်လေးကို နှစ်သက်ပါတယ်..
လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အောက်က လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
7:43:00 PM 2014, movies4comments
ဖျက်ချခံရတာ၂ ကြိမ်ရှိပါပြီ..၃ ကြိမ်မြှောက်ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
မင်းသားကြီး အာနိုး ရဲ့ 2014 ထွက်ဇာတ်ကားသစ်ပါ..
အာနိုးဇာတ်ကားဆိုရင် အထွေအထူး ညွန်းဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
၀ါသနာတူရင် အောက်မှာ ကြည့်ပေတော့..
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၁ ) ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
5:14:00 AM movies, Prison Break 1 comment
အခု Season2episode 21 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
၂ ပိုင်းတင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ ၁ ပိုင်းနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးကြပါ..
တနေ့ တပိုင်း ပုံမှန်တင်ပေးမှာပါ..
နှစ်သက်ရင် ကွန်မန့် လေးတွေ ထားခဲ့ကြပါ ရှယ်ပေးကြပါ..
အပိုင်း ( ၁ ) ကနေ စကြည့်ချင်ရင် ဒီလင့် ကို ကလစ်ပါ..
1:22:00 AM movies No comments
၂၀၀၈ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ ကမ္ဘာကျော် AVATOR ဇာတ်ကားကို ကျော်လွန်ပြီး ဒါရိုက်တာဆုကို ရသွားတာကတော့ Hurt Locker ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပါ.. ထူးခြားမှု့ အဖြစ် AVATOR ရဲ့ဒါရိုက်တာက ဂျိမ်းကင်မရွန်ဖြစ်ပြီး Hurt Locker ရဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ ကက်သရင်းဘီဂျလို ဖြစ်ကာ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ ကွာရှင်းထားကြတာပါ..
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါတယ်.. ကက်သရင်းဟာ ဂျိမ်းကင်မရွန်းနဲ့ ကွဲကွာပြီးတဲ့နောက် အထီးကျန်ဝေဒနာကို မခံစားနိုင်တာနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကမ္ဘာ့အနှံ့ ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံကိုလဲ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်.. တိုက်ပွဲနေရာတွေအထိ သွားခဲ့ကာ စစ်မြေပြင်မှာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ဘဝကို အနီးကပ်လေ့လာရင်း သူခံစားနေရတဲ့ ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာမိကာ ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့ စိတ်ကူး ပေါ်လာခဲ့တာပါ..
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရိုက်ထားပေမဲ့ ဒီစစ်ဇာတ်ကားဟာ သဘာဝနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီပြီး ယခင်မြင်နေကျမဟုတ်တဲ့ ရသအသစ်ကို ပေးပါတယ်.. တေးဂီတအနေနဲ့လဲ ဇာတ်ကားအစနဲ့ အဆုံး နှစ်ခန်းမှာပဲ ပါဝင်ပါတယ်.. ကင်မရာကိုလဲ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ သတင်းယူတဲ့ ပုံစံမျိုး လှုပ်ရှားမှု့ တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားပါတယ်.. ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ သူတွေကလဲ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ထားနိုင်သလို စကားလုံးတွေကိုလဲ အပြင်မှာ ပြောဆိုနေကြ ပုံစံမျိုးပဲ ပြောစေလို့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်အလား ထင်မိစေပါတယ်..
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အီရတ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗုံးရှင်းလင်းရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဆာဂျင်ဂျိမ်းမ်ရဲ့ အကြောင်းကိုပဲ ရိုက်ကူးထားတာပါ.. အသက်အန္တရာယ် များလှပေမဲ့ မကြောက်မရွံ့သူဘာလို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သလဲ.... မပြေလည်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ အထီးကျန်ဆန်မှု့ တွေက သူ့ကိုရဲရင့်စေခဲ့သလို ဘာကိုမှ အမှု့ မထားစေတော့ပါဘူး.. ဒီဘဝမှာပဲ သူအသားကျနေပြီး ပျော်နေနိုင်အောင် ကျန်တဲ့အရာတွေက သူ့ကို ဥပက္ခာပြုခဲ့ကြတာပါ..
ဇာတ်ကားအစအဆုံး လှုပ်ရှားမှု့ တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ပြထားပေမဲ့ ဒါရိုက်တာ ပေးချင်တဲ့ရသကတော့ အထီးကျန်ဆန်မှု့ တစ်ခုကိုပါ.. ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှု့ ဟာ ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းခန့်ပဲ ကုန်ကျခဲ့ပေမဲ့ ယခုချိန်ထိ ဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီပြီး ဝင်ခဲ့ပါပြီ.. အော်စကာဆုရပြီးနောက်ပိုင်း ကက်သရင်းနဲ့ အင်တာဗျူးများကို ဖတ်မိကြပြီး လူတွေစိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ရင်း ပိုပြီး နာမည်ကျော်လာခဲ့တာပါ..
ဇာတ်ကားရဲ့ Theme Plot လေးကို ကက်သရင်းကိုယ်တိုင် ရေးသားပြီး သူ့ နှလုံးသားနဲ့ ရင်းနှီးပြီး ထွက်လာတဲ့ စကားလုံးတွေပါတဲ့.. ဒီစကားလုံးတွေကို ဇာတ်သိမ်းပိုင်း အခန်းရဲ့ ရှေ့မှာ စစ်ပြန်ဆာဂျင်ဂျိမ်းက လသားအရွယ် သူ့သားငယ်လေးကို ပွေ့ချီထွေးပွေ့ရင်း ပြောစေခဲ့တာပါ..
`` အခုချိန်မှာတော့ သားမှာ ချစ်စရာတွေ.. ပျော်ရွှင်စရာတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့လေ.. ချစ်ရတဲ့ အဖေအမေရှိမယ်.. ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေရှိမယ်.. သူငယ်ချင်းတွေ ရှိမယ်.. ဆော့စရာ အရုပ်လေးတွေ ရှိမယ်.. ဒါပေမဲ့ သားရယ်.. ဒီအရာတွေက သားကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ သားဘဝကနေ တစ်ခုချင်း ထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်.. နောက်ဆုံးမှာ တစ်ခုပဲ ကျန်ခဲ့တော့မယ်လေ...... ´´
မိတ်ဆွေတို့လဲ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ.. ကြည့် ပြီးသူများလဲ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ.. ဇာတ်ကားဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကက်သရင်းရဲ့ ခံစားမှု့ မျိုးကို ခံစားမိပါလိမ့်မယ်.. မိတ်ဆွေတို့ ဘဝထဲမှာကော ချစ်ရသူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက် စွန့်ခွာသွားပြီလဲ.....?
စာညွန်းကို..ဒီကနေ မှ ယူပါတယ်.. ဖုန်းသမားတွေကတော့ အောက်က Download ကနေ
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၂ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၁ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Cleaner Professional & Bussiness Edition. v4.16
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂၀ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
The Four -2( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Riki-Oh The Story of Ricky (1991) BluRay 720p
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၉ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Seed2The New Breed (2014) BluRay 720p
Internet Download Manager 6.21build 2
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၈ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
ကျနော် ဆိုဒ်လေးကို ဖုန်းထဲကနေ အလွယ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၇ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၆ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၅ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၄ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၃ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Noah (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၂ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Urban Games ( 2014 ) Full movies
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၁ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
SURVIVOR ( 2014 )
FIFA World Cup 2014 Closing Ceremony
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁၀ ) ( မြန်မာ စာတန်း...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၉ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၈ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Internet Download Manager v6 .21
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၇ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Underworld (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Underworld (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၆ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
FIFA World Cup 2014 Semi-Final Argentina Vs Nether...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၅ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Underworld (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Underworld (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၄ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၃ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၂ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Prison Break အတွဲ ၂ အပိုင်း ( ၁ ) ( မြန်မာ စာတန်းထ...
Once UponaTime in Vietnam (2014)
Prison Break အပိုင်း ၂၂ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၂၁ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၂၀ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
The Legend of Michael Kohlhaas (2013) မြန်မာစာတန်...
Prison Break အပိုင်း ၁၉ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၈ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )
Prison Break အပိုင်း ၁၇ ( မြန်မာ စာတန်းထိုး )